“Sit-in”, teny Anosy: nitaky ny hampiharana ny lalàna ireo mpisolovava | NewsMada
“Sit-in”, teny Anosy: nitaky ny hampiharana ny lalàna ireo mpisolovava
Tsy nipetra-potsiny. Nidina an-dalambe, nanao hetsika teny amin’ny manodidina ny fitsarana Anosy ny eo anivon’ny Holafitry ny mpisolovava, omaly. Tsy hanaiky izy ireo raha ho vitavita mora ilay vono sy daroka nihatra tamin’ny naman’izy ireo tetsy Antanimena.
Mivonona ny handeha hatramin’ny farany ary tsy hanaiky. “Fanehoana firaisankina amin’ny namanay niharan’ny herisetra teny Antanimena ny marainan’ny asabotsy teo izao hetsika izao. Toherinay amin’ny herinay rehetra koa ny tranga tahaka ireny ary takinay tanteraka ny hampiharana ny lalàna, amin’ny maha tany tan-dalàna ny firenena”, hoy ny fanambaran’ny teo anivon’ny biraon’ny Holafitry ny mpisolovava. Nialohavan’ny diabe manodidina ny teny amin’ny lapan’ny fitsarana Anosy izany hetsika izany.
Nambaran’izy ireo fa efa nisy ny fitoriana napetraky ny Holafitry ny mpisolovava, ny faran’ny herinandro teo, manoloana iny herisetra iny.
Fizahozahoana sy fanamparam-pahefana…
Samy nanameloka ny tranga herisetra niseho iny avokoa, na ny polisim-pirenena, na ny mpiaro ny zon’olombelona sy ny teny anivon’ny primatiora.
Marobe ny fihetsika na tranga mitovy amin’ireny any amin’ny tany lavitra andriana rehetra any, saingy lafitsaran’ny tambajotran-tserasera ny nielezan’ny vaovao haingana, ho an’ny aty an-tanan-dehibe. Mainka moa fa any ambanivohitra any. Fomba ratsy fanaon’ny sasany ny fizahozahoana sy ny fanamparam-pahefana ary koa ny tsy refesi-mandidy, tahaka ireny, na inona na inona zava-misy sy nitranga. Mety ho tampohin’ny fahefana kely ka manao ny tsy fanao sy tsy mandinika.
Tompon’ny lalàna sy manao didy jadona
Eo koa ny filazana ho mahalala olona mpitondra sy mpitantana izatsy na izaroa na akaiky ny tena ka zary lasa tompon’ny lalàna sy manao didy jadona. Mivoaka avokoa ny teny feno fiavonavonana sy ny fampihorohoroana. Eo koa ny tsindry aloka mbola miampy ny fampiasana fitaovana aza izany, toy ny basy ohatra, tahaka ity niseho teny Antanimena ity. Misy fetrany sy farany ihany anefa izany ary tsy dondrona avokoa ny Malagasy rehetra ka hanaiky hotsindrina hatrany isaky ny mihetsika. Tokony hanova fomba fisainana ny tsirairay. Ifandimbiasana ny fitantanana sy ny fahefana ka tsy tokony hanaovana tsinontsinona ny hafa izany na hampiharana tsindrihazolena. Araka izany, hampiharo ny lalàna, araka ny fitakian’ny mpisolovava … Andrasana ny ho tohiny.